DHEGEYSO-Qalliin Lacag la’aan ah oo kasocda cisbitalka Garoowe. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Qalliin Lacag la’aan ah oo kasocda cisbitalka Garoowe.
Agoosto 27, 2016 5:17 b 0
Garoowe, Aug 27 2016–Cisbitalka guud ee magaalada Garoowe ayaa waxaa kasocda olole ballaaran oo qalliin iyo daawayn loogGaroowe, Aug 27 2016–Cisbitalka guud ee magaalada Garoowe ayaa waxaa kasocda olole ballaaran oo qalliin iyo daawayn loogu samaynayo haweenka qaban xauunka iskufuranka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland.
u samaynayo haweenka qaban xauunka iskufuranka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland.
DHEGEYSO WASIIRKA CAAFIMAADKA Puntland.